Home Wararka Qaban qaabada doorashada Jubbaland oo si xoowli ah ku socoto & ...
Qaban qaabada doorashada Jubbaland oo si xoowli ah ku socoto & B. Caalamka oo soo dhawaysay
Waxaa ka socda magalaada Kismaanyo qaban qaabada doorashada Jubbaland iyada oo jadwalkii ay sameeysteen gudiga doorashada aan laga leexan. Odoyaal dhaqameed dhawaan loo qabtay tababar ku saabsan habraaca xulista Baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in uu bilawday xulista Xildhibaanada Cusub.
Sida ay sheegyaan wararka ka imaanaya Jubbaland, gudiga doorashada ayaa ku wargaliyay beelaha ay ka soo jeedaan Xildhibaanada kuraasta loo tartamaya in odoyaashooda diyaariyaan xubnaha ku matalaya Baarlamaanka Cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Odoyaashaan dhaqanka ee Jubbaland ayaa sheegay in odoyaashu dhaqanka ay dhan yihiin. Madax dhaqameedkaan kulanka ku yeeshay Magaalada Kismayao ayaa tilmaamay in labo Oday ay ka maqan yihiin, iyagana ay casuuman yihiin.
Musharixiin u tartameysa xilka ugu sareeyo Jubbaland ayaa dhowaan ashtako ka muujiyay guddiga doorashada oo ay ku eedeeyeen in ay u xaglinayaan Madaxweyne Axmed Madoobe. Laakiin beesha caalamka oo qadka teefanka kula hadashaday gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa ku bogaadisay shaqada wangaasan ee uu gudiga doorashooyinka ka wadaan magaalada Kismaanyo.